Xurguftii Siyaasadeed Ee Saxaabada: Muqadisnimada Mabaadii'da Ayaa Ka Mudan Meeqaamka Ashkhaasta — Diyaariye: Prof. Axmed M. Ismaaciil
Wednesday June 24, 2020 - 08:27:46 in Wararka by Wariye Tiriko
Sida mashaayikhdu tibaaxdey, qalimo fayow, oo ka bed qaba Jahli iyo dulmi, qalimo cilmi iyo caddaalad qoraya ayaa aynu ku dheehan doonnaa Sooyaalkan. Qalin daraalahan ayaa si dhawr la’ u tafniidi doona dhacdooyin in badan oo bulshada muslimka ah ay xasaasiyad ka qabaan xuskeeda iyo soo hadal qaadkeedaba; waa taariikhda abuurtay in muslimku uu u kala calool go’o labo dariiqo: Shiico iyo Sunni. Soomaalida ayaa ku maahmaahda; "Awr kala guurtey waa la arkaaye, Uur ka la guurey baa u daran”
"Iyaga uun baa ah kuwa Allaah iyo Rasuulkiisa rumeeyay, ee aan kaba shakiyin, Allaah daraaddii naf iyo maalba ugu dirirey, kuwaas uun baa iyagu runlow ah” (Al-xujuraat 15).
Sida Ahlu Sunne qabo tilmaamaha Saxaabadu waa dad "caddaalad” leh, ma jiro qof ka mid ah Saxaabada oo Rasuulka been ka sheega. Haddii aynu doonayno in aan fahamno qaddiyaddan waa in aynu ictibaarino; Asalka shareecada aynu cuskanno ee dhidibada inoo ah iyo dhuuxidda sooyaalka ummadda muslimka ah (Taariikhda).